Madaxweyne Trump oo dedejinaya qorshe lagu ciqaabayo Shiinaha – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweyne Trump oo dedejinaya qorshe lagu ciqaabayo Shiinaha
By Radio Dalsan Reporter	 On May 5, 2020
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dedejinaya hindise Shiinaha looga wareejinayo wax soo-saarka warshadaha, iyo canshuuro kale oo Beijing loogu ciqaabayo qaabkii ay ula tacaashay cudurka Coronavirus, waxaa sidaas sheegay saraakiil xog ogoal u ah qorshaha Mareykanka.
Madaxweyne Trump oo dhowaanahan sare u qaaday weerarada ka dhanka ah Shiinaha, ayaa marar badan ballan-qaaday inuu dalka kusoo celin doono wax soo-saarka warshadaha Mareykanka ee dibedda loo wareejiyey sanado kahor.
Hase yeeshee, burburkii dhaqaale iyo dhimashadii uu horseeday cudurka Coronavirus ayaa sare u qaaday tallaabo lagu joojinayo alaabaha Mareykanka ee lagu soo sameeyo Shiinaha, xitaa haddii ay noqoto in loo weeciyo dalal kale oo loo arko kuwa saaxiib la ah Mareykanka.
“Muddo ayaan ka shaqeyneynay inaan yareyno ku tiirsanaanta warshadaha Shiinaha, hase yeeshee iminka waan dedejineynaa hindsaheena,” waxaa sidaas yiri Keith Krach, oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka ee arrimaha Kobaca Dhaqaalaha, Tamarta iyo Deegaanka.
Krach ayaa sheegay in arrintan ay muhiim u tahay amniga Mareykanka.
Waaxda Ganacsiga Mareykanka iyo hay’adaha kale ee arrimahan ku shaqada leh ayaa raadinaya hab shirkadaha loogu qasbi karo inay joojiyaan inay badeecadaha kusoo sameeyaan warshadaha Shiinaha. Tallaabooyinka laga fikaryo waxaa ka mid ah canshuur dhaaf iyo taageero kale oo dhaqaale oo la sameeyo.
Trump ayaa marar badan ku celiyey inuu canshuur kale oo dheeri ah ku dari doono canshuur dhan 25% oo saaran badeecadaha laga soo dhoofiyo Shiinaha oo qiime ahaan dhan 270 bilyan oo dollar, si shirkadaha loogu qasbo inay joojiyaan alaabaha lagu soo farsameeyo Shiinaha.
Faah faahin:-Dagaal xoogan oo weli ka socda degaan ka tirsan Galgaduud
Prev	Next 1 of 11,614